Ngokuqinisekile abantu abaningi bakhumbula ingoma ehlekisayo mayelana no-Washuu onamahloni, abangani abasiza ekubhekaneni namahloni futhi bahlabelele ingoma "kumsindo." Konke lokhu kungaba yinto engafaneleki, uma kwakungeyona inkinga enkulu. Umthelela oqinile womsindo emzimbeni womuntu uyaziwa kakhulu kwabakhileyo bezintaba. Bayizungezwe isizinda esingenasiphelo esivumayo kakhulu esivamile.
Ukumemeza ukukhathala okwenyukayo, ukunciphisa umqondo wengqondo, umbono okhubazekile, izinzwa, nesifo senhliziyo. Ukusuka emsindweni owedlulele, umkhawulo wokuzivikela omzimba uyancipha futhi imvamisa yezifo zanda ngokuphawulekayo; ukucasuka kwanda. Ukubheka kubonisa ukuthi ezindaweni zasemadolobheni ezinomsindo isibalo sabantu esiphezulu sinamaphesenti amathathu ngaphezu kokuthula. Kuthiwa ukuthi umsindo njengento yezemvelo kuholela ku-15% kuzo zonke izifo zomsebenzi. Futhi ukungcola komsindo akukhona nje emgwaqweni, ezokuthutha umphakathi, emsebenzini, kodwa nasekhaya.
Imisindo yemvelo yemvelo ivame ukuba mnandi ukubona futhi ewusizo. Njengoba esezitholile ngaphansi kohlobo, umuntu ngokwakhe uziphakamisile kude nemikhawulo futhi uzizungezile ngezwi lomculo technogenic. Imithombo yomsindo edolobheni ihlukene kakhulu. Okuyinhloko yizokuthutha, okukhiqiza u-60-80% womsindo wonke. Izakhamuzi zasezindlini ezisemigwaqweni emikhulu yezindawo zasemadolobheni azizwa nje umthelela womsindo. Ngenxa yethrafikhi (kufaka phakathi i-metro), kukhona ukudlidliza kwezakhiwo, ukuthungulwa kwezakhiwo. Kuyathakazelisa ukuthi ngokubunzima ukujwayela umsindo oqhubekayo, umuntu angazizwa engakhululekile, elele ngokuthula. Ukuqeda idolobha, kwenzeka, awukwazi ukulala isikhathi eside. Ukuthula. Thule kakhulu ... Sizwa okuningi kunalokho esikucabangayo. Imikhuba yokuqala yokuhlanzeka yomsindo evumelekile ezweni lethu lakhiwa yiMoscow Scientific Research Institute of Hygiene okuthiwa emva kweF.F. Erisman futhi avunywe yiMnyango WezeMpilo waseRussia ngo-2002. Izindlela zokuhlanzeka ezingeni elizwakalayo lomsindo ezindaweni zemikhakha emincane, ekukhiqizeni, nasezindlini zomphakathi nezokuhlala, zilawulwa ngokwakhiwa kwemigomo nemithetho. Ngaphezu kwalokho, kunesimiso se-State for izimoto, imishini yobunjiniyela, imishini yasendlini, ukusungula izimfuneko zokuhlanzeka ekuhlinzekeni induduzo yama-acoustic. Izinga lomsindo lilinganiselwa kuma-decibel (dB). I-pitch (imvamisa) ibuye ilandwe. Izingoma eziphezulu kakhulu zibonakala ziphakama kunamazinga aphansi awamandla afanayo.
Cishe lokho, ukuze ulayishe izindlebe zakho siqu, kungenzeka ukuba unakekele futhi uqobo. Ukusuka komsindo wangaphandle (emgwaqweni) kungavinjelwa ngamafasitela anamuhla wokuqeda amafasitela aphikisana ne-double-glazed. Ukusuka komsindo wangaphakathi, amaphepheni agcinwa phansi nasezindongeni (ngaphandle uma kunezifo ezigulayo endlini). I-gypsum plasterboard yokuqothulwa eseduze nendawo yomakhelwane. Ungakhansela izinsizakalo ezikhethekile (izikhungo zesifundazwe ezihlanzekile ezingcolile kanye nezokuphepha kanye nezemvelo) ezimweni lapho ukuphila kuphazamisa, isibonelo, umsebenzi wokwakha ubusuku obomakhelwane. Uma omakhelwane benza umsindo, zenze isinqumo sakho. Kodwa kungcono - emva kokuxoxisana kokuqala kokuthula. Futhi, sicela, ungakhohlwa ngempilo yabanye.
Izinyathelo zokulwa nokungcoliswa komsindo, yiqiniso, ziyathathwa. Ukuvimbela ukungcola komsindo kunomkhawulo wethrafikhi yempahla (eMoscow - kusukela ngo-2003), imoto yokuhamba ebusuku, itramu isuswa. Kunezinyathelo eziningi zokuthuthukiswa zasemadolobheni zanamuhla ezihloswe ngomsindo onqenqemeni.
• Ukususwa (uma kunokwenzeka) kwezakhiwo zokuhlala (izakhiwo ezintsha) ukusuka emigwaqweni yezindlela zomgwaqo.
• Ukuhlelwa komhlaba nokudala izindawo ezingezona ezokuthutha noma ezihamba ngezinyawo.
• Lapho kukhona izingxenye zesitimela ngaphakathi kwedolobha, kwakhiwa izikrini ezikhethekile ukunciphisa izinga lomsindo (amagaraji, izindawo zokugcina izinto, njll).
• Ezimweni zokulahlekelwa kwezindawo zokuthuthukiswa kwamadolobha, ukusetshenziswa kwezindlu zomsindo wokuvikela umsindo kuyindlela evikelekile yokumelana nomsindo wethrafikhi. Ezindlini ezinjalo, amakamelo aphilayo nokulala abhekene namafasitela ahambisana nomthombo womsindo.
Indlela yokunciphisa ukucindezeleka kwegazi ngaphandle kwemithi
Impahla yamafutha abalulekile we-grapefruit
Kungani amabala omdaka avela esikhundleni sezinyanga zonke?
Umswakama omnyama: izimbangela kanye nesiqondiso sesenzo
Ukunakekela ingane encane esanda kuzalwa
I-Quesadillas nenkukhu nama-apula
I-Horoscope ye-Gemini-Abesifazane ngo-Ephreli 2017